Nintendo yakawana kutenderera 2,9 mamirioni muzuva rimwe neFire Emblem | IPhone nhau
Rimwe zuva takakuudza izvozvo Fire mufananidzo, Mutambo wechitatu waNintendo wemafoni ekushandisa wakazosvika paApp App. Nhasi tinofanirwa kutarisa kumashure kuti tione mashandiro akashanda, ayo andakakurumidza kushoropodza, uye ndezvekuti Nintendo anoziva chaizvo maitiro ekuvandudza mitambo inokonzeresa uye inovaraidza, asi zvinoita sekunge iri kuzvikwanira pachayo mhando yerudzi. Zvirokwazvo, kubudirira kwauri kukohwa Moto Emblem Magamba pane iyo App Store iri pazasi pazasi Pokémon GO uye kure kure newaanoshanda naye, Super Mario Mhanya.
Isu tinoenda neyakachena uye yakaoma data iyo iyo yaanotipa kwatiri Sensor Tower, uye ndezvekuti isu tinotanga kubva pachigadziko icho Pokémon GO yakakwanisa kuunganidza isingasvike pamadhora gumi nemamiriyoni gumi nemaviri pazuva rayo rekutanga, ichiteverwa Super Mario Mhanya, mutambo wechipiri wakakwirisa wechipiri munguva ino, uine $ 8,4 mamirioni. Yetatu saka inonyangira, kudzikisira chigaro rwisana Remake. Kuti, Moto chiratidzo magamba inoita sewechitatu-wepamusoro mutambo wakakura muzuva kubva payakatangwa ne $ 2,9 mamirioni.
Mutambo uyu unoverengerwawo sewechitatu wakanyanya kudhanilodwa pazuva rekutanga, wakaenzana pachinzvimbo neuyo wawakambobvisa pachigaro, rwisana Remake, iine mamirioni maviri kurodha pasi. Zvakare, kure ne Pokémon GO iyo yakaunganidza mazana mana emamiriyoni ekudhawunirodwa, uye Super Mario Run izvo zvakaramba zviri mumamirioni matanhatu ekurodha pasi. Zvirokwazvo, Fire Emblem Heroes Hazvishamise chero munhu, inotorwa nekuda kwekubatana kwayo neNintendo, zvisinei, hazvina kuoma kuverenga wongororo pane iyo iOS App Store inoratidza izvo mutambo haukwezve kana muchikamu chehunyanzvi kana mumutambo wemutambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nintendo yakagadzira nezve 2,9 mamirioni muzuva rimwe neMoto Emblem